Ụlọ RTP pụrụ iche maka ire ere dị nso Research Triangle Park, Chapel Hill, Durham
Home » Ndepụta » Ogwu
Sq Na: 3500
Ụlọ RTP ndị na-abụghị ọkọlọtọ maka ire ere.
Ọkachamara, ihe dị iche - ihe dị iche iche n'etiti ebe obibi ndị na-anọchi anya ya. E wepụrụ ya na 1.7 ka ọ bụrụ na ọ na-echekwa ma ọ bụ na-akwado ihe ụfọdụ 14 acres nke ala ndị dị na HOA, nke a mara mma nke oge a jikọtara nke ọma na oke ọhịa. Mgbe ọ na-abanye, ọ na-apụta ngwa ngwa na onye na-ese ụkpụrụ ụlọ ahụziri ebe obibi zuru oke maka ọnọdụ ahụ. Ogologo ime ụlọ ọ bụla dị iche iche jupụtara n'ìhè, inye echiche na ịnweta ihe gbara ya gburugburu. Ihe a na-atụ anya ya bụ akụkọ abụọ na ọkara mara mma, 25 'nnukwu onrium nke zuru oke maka ikuku ikuku na-eme ka ikuku dị ọcha ma ọ bụ igosipụta ọrụ nkà. Site n'inweta oghere ahụ, nnukwu ụlọ nkwonkwo na-asacha batrị na-agụnye ihe dị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke isi ala ma na-agụnye oghere ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpuchi ọkụ, nke nwere ike igosi ọkụ site na akwa. Ọzọkwa na atrium bụ ụlọ oriri na-ekpo ọkụ nke mbara igwe na-ele anya na ime ụlọ na-ekpuchi ọkụ na-enwu ọkụ na-ere ọkụ ma na-abanye n'èzí nnukwu oghere. Ụfọdụ n'ime ihe ndị ọzọ dị n'ime ime ụlọ na-agụnye otu kichin ime ụlọ na-emeghe ka ụlọ ezinaụlọ nke nwere okpomọkụ na-ekpuchi ụlọ na 2 mgbidi windo. N'elu elu ma na-ele anya ala ma banye n'ime ogige ahụ bụ nnukwu ụlọ ọrụ isi, onye nwe ụlọ nke abụọ, ime ụlọ ndị ọbịa. na onye ọzọ bat. Na-erite uru site na ebe a, ihe a dị jụụ ma zoro ezo, ma na-eje ije n'ebe dị anya na ọdọ mmiri na telivishọn na nanị nkeji si Triangle Park Research (RTP).
Ahịa: $ 449,900
Okwu: 10517 WHITESTONE RD
Koodu mpaghara: 27615
Afọ Wuru: 1983
Ụkwụ Square: 3500
Oke Lot: Ụlọ ọrụ 1.7
Ntụrụndụ: Osisi, Tenis, Ọdọ
Nke gara agaLakefront Community na Ọdọ MmiriIhe na-esoteCharlotte Mid-Century Ugbu a
Lakefront Community na Ọdọ Mmiri